Quilotoa, pealu nke Andres nke Ecuador | Akụkọ Njem
Quilotoa, pealu nke Andes nke Ekwedọọ
Enric Gili | | Ecuador, General, Nduzi, Ihe ị ga-ahụ, Quito
Quilotoa bụ ugwu mgbawa dị na Andes nke Ekwedọọ nke olulu ya gbakọtara ihe a na-akpọkarị ọdọ mmiri. Ọ dị kilomita 3 n’obosara na ihe dị ka mita 250 n’omimi, na-eme ka ọ bụrụ otu n’ime ọdọ mmiri ọdọ mmiri kasị ukwuu na nke kasị dị egwu n’ụwa.
Ọ bụ ugwu ugwu kachasị elu na Ecuador ma bụrụ akụkụ nke Ogige Ntụrụndụ Cotopaxi. Lush turquoise acha anụnụ anụnụ nke mmiri ya bụ n'ihi nnukwu ego nke mineral dị na ọdọ ahụ.
Ọ bụ caldera na-emikpu, jụrụ ya na lava ejiri nwayọ nwayọ mee ka ọ bụrụ nke a na-apụghị imeri emeri ma mepụta ọdọ mmiri n'ihi arụghị ọrụ nke ugwu mgbawa na nchịkọta mmiri ozuzo, dị ka nke Quilotoa. Imirikiti ọdọ - ugwu ọkụ dị na kọntinent America, na Europe anyị nwere ike ịchọta ha na Iceland na Portugal.
Ọ bụ otu n'ime njem kachasị mma ma dị mkpa na Ecuador. Routezọ ọ bụla site na mba Andean ga-agarịrị ileta elele ọdịdị a.
1 Otu esi enweta Quilotoa?
2 Kedu ihe ị ga-eme na Quilotoa?
3 Latacunga, mmalite maka Quilotoa
Otu esi enweta Quilotoa?
Ọ bụ otu thezọ kachasị ọsọ si n'obodo Latacunga, ihe dị ka 75Km (1 awa na ọkara site n'okporo ụzọ). Nwekwara ike ịga site na Ambato, ihe dịka 120Km, site na Latacunga na ọbụna site n'isi obodo ahụ, Quito. Echere m na ebe dị anya site na Quito toro oke ogologo ịga mpaghara ahụ na-enweghị ihe kachasị mkpa.
Enwere ụzọ abụọ iji rute ugwu mgbawa: site n'ụgbọ ala (ma ọ bụ nke onwe ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere onye ndu mpaghara) ma ọ bụ site na bọs ọha Site na ọdụ ụgbọ ala bụ isi na Latacunga, ugbu a enwere bọs 1 na-aga kwa ụbọchị na-agafe obodo Zumbahua ma ọ bụ bọs kwa awa ọ bụla gaa obodo a ma jiri tagzi gaa Quilotoa.
N'ihe m, agbazitere m onye ndu mpaghara nwere ụgbọ ala Latacunga ka m nwee ike ịga leta ụmụ amaala obodo ahụ wee ghọta mmalite na akụkọ ihe mere eme nke ugwu mgbawa na ọdịbendị nke mpaghara ahụ.
N'otu ụzọ ahụ m kwuru ya maka ugwu ugwu Cotopaxi, ọ dị mkpa ịmata nke ahụ anyị ga-anọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 4000 nke elu. Ọ bụrụ na anyị amarabeghị ya, anyị nwere ike inwe isi ọwụwa na ọrịa ugwu. Ọ dị mkpa imeghari na elu nke mba obere obere, ịghara ịga site n'ụsọ oké osimiri gaa na mpaghara dị elu nke Andes n'ihi na ọ nwere ike imerụ ahụ ike.
M na-atụ aro ka ị weta uwe na-ekpo ọkụ, ugwu ma ọ bụ egwuregwu na akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ekwesị. Zọ ọdọ ahụ na-amị amị.
Roadzọ na-aga Quilotoa na-agafe ugwu ugwu Andean mara mma nke ukwuu. Ọ bụ mpaghara ebe amaala amaala amaala. Na Thursday, a na-enwe ahịa dị mma na mpaghara na Saquisilí. Obodo a dị ọkara gafee Quilotoa.
Ọ bụ njem mmụta na Enwere ike ime ya n'otu ụbọchị ahụ site na Latacunga. N'ọnọdụ ọ bụla, na mpaghara nke ọdọ mmiri na n'obodo ndị gbara ya gburugburu enwere obere ebe obibi na gọọmentị Ecuador na-enye ohere ka ha maa ụlọikwuu na ugwu ugwu site na ikike mbụ.
Ana m akwado ka ị kwụsị 1 ma ọ bụ abụọ kwụsị n'ụzọ tupu ị rute ugwu mgbawa iji chọpụta ma nwee ọmarịcha omenaala na ọdịbendị nke mpaghara ahụ. Ọ mara mma nke ukwuu ma na-atọ ụtọ ịhụ ka ndị bi n’ógbè ahụ si ebi.
Ozugbo ị ruru ebe ahụ, ị ​​ga-akwụ ụgwọ maka ịnweta ebe a na-adọba ụgbọala na ụlọ ahịa ụmụ amaala.
Kedu ihe ị ga-eme na Quilotoa?
N'adịghị ka ihe mmadụ nwere ike iche, ebe a na-adọba ụgbọala dị n'elu ugwu mgbawa ma ọ bụghị n'okpuru. Ihe mbụ anyị na-ahụ bụ ọdọ site n’ebe dị anya, si n’elu ihe niile. Ọ bụ ugwu mgbawa na ileta ya ị ga-agbadata ma ghara ịrịgo.
Es otu n'ime ihe osise kachasị mma nke Ecuador: dọba ụgbọ ala ahụ, jee ije na-agagharị (n'oge ahụ ị nweghị ike ịhụ ihe ọ bụla) ma lee mberede nke ugwu mgbawa na ọdọ mmiri na mberede. Ọ na-ahapụ gị ikwu okwu. N'oge ọ bụla, ọ na-enye gị mmetụta na mgbe ụdọ ụgbọ mmiri ahụ gachara, e nwere ndagwurugwu na-aga ọdọ mmiri, 3 kilomita n'obosara na 250 mita miri emi.
Ozugbo ahụ, ọ na-adọrọ mmasị gbadaa n'ọdọ mmiri. Maka nke ahụ, e nwere ụzọ nwere nnukwu mkpọda na-agbada na ndagwurugwu.
N'ihe dị ka ọkara otu awa, njem niile gaa na ọdọ ahụ emeela. Ikwesiri ịkpachara anya ka ala ahụ na-amị amị. Upzọ dị elu siri ike ma chọọ ihe karịrị 1 hour ma ọ bụ otu awa na ọkara iji mee ya, ọ bụ ezie na ozugbo ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ ahụ iji bulie gị n'elu ịnyịnya.
N'ebe ahụ ị nwere ike lerukwuo anya na fumaroles nke ugwu mgbawa, nke n'agbanyeghị na ọ naghị arụ ọrụ, ka na-ewepụta gas site na ala nke ọdọ mmiri ahụ. Enwere ike ikpuchi akụkụ nke ọdọ mmiri ahụ n'ụzọ dị mfe.
Latacunga, mmalite maka Quilotoa
M na-atụ aro ka ị gaa n'etiti Latacunga, nọrọ na obodo a wee gaa njem n'echi ya. A na-ahụta ya obodo kachasị ukwuu na "Quilotoa circuit" na isi ụzọ mbata maka Quilotoa na Cotopaxi National Park. Ọ bụ isi okwu dị na Andes (ọ nwere ọdụ ụgbọ elu dị mkpa maka mba ahụ).
Isi na-adọrọ mmasị nke ndị bi na niile chọọchị ya dị n'etiti na katidral ya, site na narị afọ nke XNUMX. Ọ bụghị obodo ndị njem nlegharị anya na nke ahụ na-enyere aka ịtụgharị uche n'ụzọ ndụ ndị Andean Ecuadorians.
Obi abụọ adịghị ya, Quilotoa bụ otu n'ime ebe ndị ị na-agaghị echezọ ma ọ bụrụ na ị gaa na ya. Nnukwu ugwu na ugwu mara mma mara mma. Ana m akwado kpamkpam ịhụ ụdị ngosi a nke okike ma ọ bụrụ na ị nwere ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Ecuador » Quilotoa, pealu nke Andes nke Ekwedọọ
London nwekwara ụlọ ọgbara ọhụrụ
Gaa London na ngwụsị izu